Qarax ka dhacay makhaayad kutaala magaalada Afgooye oo dilay ugu yaraan saddex qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQarax ka dhacay makhaayad kutaala magaalada Afgooye oo dilay ugu yaraan saddex qof
January 24, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Qarax ka dhacay makhaayad kutaala magaalada Afgooye oo dilay ugu yaraan saddex qof. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa lagu dilay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lagu xiray makhaayad kutaala gudaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, sida uu sheegay sargaal.
Taliyaha ciidamada booliiska Afgooye ayaa warbaahinta dowladda ee Radio Muqdisho u sheegay in qaraxa lagu qariyay gudaha makhaayada uu qarxay.
Taliyaha ayaa sheegay in dadka geeriyooday iyo kuwa dhaawacmay ay ku jiraan askar iyo rayid.
Afgooye waa magaalo beereed istiraatiiji ah oo qiyaastii 30 km dhanka koonfur-galbeed kaga beegan caasimada Muqdisho.
Ma jirto cid sheegatay in ay iyagu ka dambeeyaan qaraxa, balse tani waxa ay imaanaysaa wax ka yar 12 saacadood kadib markii dagaalyahano Al-Shabaab ah ay weerareen saldhig ciidan oo kuyaala gudaha magaalada Afgooye, ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay weerarkaas.
November 16, 2017 Milatariga Mareykanka oo sheegay in ay ku dileen dhowr dagaalyahan oo Al-Shabaab ah duqayn ka dhacday deegaan u dhow Muqdisho
Garoowe-(Puntland Mirror) Dallada Daneeyaasha aan Dowliga ahayn ee Bulshada Rayidka ah ee Puntland (PUNSAA) ayaa waxay walaac ka muujisay waraaq dhawaan kasoo baxay Wasaaradda Amniga oo ujeedadu ahayd in aan la qaban karin wax shir siyaasadeed [...]